ကိုယ် တကယ် ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါ ကြည်နူးစရာအဖြစ်အပျက်လေးတွေလည်း များစွာ ကြုံဆုံလာတတ်ပါတယ်။ ဘဝက ဘယ်လောက်ပဲ ပင်ပန်းနေပါစေ နှစ်ယောက်ထဲ ရှိနေတဲ့အချိန်တွေဆို ဒီပင်ပန်းမှုတွေက အလိုလိုပပျောက်စေပြီး ကြည်နူးမှုတွေသာ မွေးဖွားစေပါတယ်။ ဒီလို ကြည်နူးမှုတွေက ချစ်စ၊ ကြင်စ၊ ညားခါစ ဇနီးမောင်နှံတွေမှာ များစွာတွေ့မြင်တတ်ရပါတယ်။ အဆိုပါဇနှီးမောင်နှံတွေမှာ ဘယ်လို ကြည်နူးမှုတွေ ရှိလဲဆိုတာကိုတော့ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ Los Angeles မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ Mary Park ဆိုတဲ့အနုပညာရှင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ရေးဆွဲ ပုံဖော်ထားပေးခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့ Nickname ကတော့ Murrz ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အောက်က ပုံရိပ်လေးတွေကြည့်ပြီး စုံတွဲတွေအားလုံးလဲ ကြည်နူးစရာပျော်ရွှင်မှုလေးတွေကို တဒင်္ဂအတွက်မဟုတ်ဘဲ ထာဝရ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
(ကိုယ္ တကယ္ ခ်စ္ျမတ္နိုးတဲ့သူနဲ႔ လက္ထပ္ျဖစ္လိုက္တဲ့အခါ ၾကည္ႏူးစရာအျဖစ္အပ်က္ေလးေတြလည္း မ်ားစြာ ၾကဳံဆုံလာတတ္ပါတယ္။ ဘဝက ဘယ္ေလာက္ပဲ ပင္ပန္းေနပါေစ ႏွစ္ေယာက္ထဲ ရွိေနတဲ့အခ်ိန္ေတြဆို ဒီပင္ပန္းမွုေတြက အလိုလိုပေပ်ာက္ေစၿပီး ၾကည္ႏူးမွုေတြသာ ေမြးဖြားေစပါတယ္။ ဒီလို ၾကည္ႏူးမွုေတြက ခ်စ္စ၊ ၾကင္စ၊ ညားခါစ ဇနီးေမာင္ႏွံေတြမွာ မ်ားစြာေတြ႕ျမင္တတ္ရပါတယ္။ အဆိုပါဇႏွီးေမာင္ႏွံေတြမွာ ဘယ္လို ၾကည္ႏူးမွုေတြ ရွိလဲဆိုတာကိုေတာ့ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ Los Angeles ၿမိဳ႕မွာေနထိုင္တဲ့ Mary Park ဆိုတဲ့အႏုပညာရွင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က ေရးဆြဲ ပုံေဖာ္ထားေပးခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့ Nickname ကေတာ့ Murrz ပဲျဖစ္ပါတယ္။
အာက္က ပုံရိပ္ေလးေတြၾကည့္ၿပီး စုံတြဲေတြအားလုံးလဲ ၾကည္ႏူးစရာေပ်ာ္ရႊင္မွုေလးေတြကို တဒဂၤအတြက္မဟုတ္ဘဲ ထာဝရ ပိုင္ဆိုင္နိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။)
၁။ ချစ်တော့ချစ်တယ် အစားနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ မရဘူးဆိုတဲ့ ကောင်မလေးမျိုးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားရင်တော့
(၁။ ခ်စ္ေတာ့ခ်စ္တယ္ အစားနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ မရဘူးဆိုတဲ့ ေကာင္မေလးမ်ိဳးေတြ ပိုင္ဆိုင္ထားရင္ေတာ့)
၂။ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးလား? ဒီလို အဆီတစ်ထပ် အသားတစ်ထပ်နဲ့ ဗိုက်ခေါက်ပိုင်ရှင်လေးတွေကို
(၂။ ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးလား? ဒီလို အဆီတစ္ထပ္ အသားတစ္ထပ္နဲ႔ ဗိုက္ေခါက္ပိုင္ရွင္ေလးေတြကို )
၃။ သင့် ချစ်သူက သေးသေးမွှားမွှားလေးဖြစ်တာနဲ့ သဲသဲလှုပ် ဂရုစိုက်ခံချင်တဲ့သူမျိုးလေးလား။
(၃။ သင့္ ခ်စ္သူက ေသးေသးမႊားမႊားေလးျဖစ္တာနဲ႔ သဲသဲလွုပ္ ဂ႐ုစိုက္ခံခ်င္တဲ့သူမ်ိဳးေလးလား။)
၄။ ချစ်တဲ့ မျက်စိနဲ့ ကြည့်လို့လား မသိဘူး ကိုယ့်ချစ်သူက ဘယ်လိုနေနေ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးသား။ လှပြီးသားနော်။
(၄။ ခ်စ္တဲ့ မ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္လို႔လား မသိဘူး ကိုယ့္ခ်စ္သူက ဘယ္လိုေနေန ဆြဲေဆာင္မွုရွိၿပီးသား။ လွၿပီးသားေနာ္။)
၅။ ကိုယ့်ချစ်သူက ချစ်လို့ အခုလို ဂရုစိုက်ပေးရင် မငြိုငြင်ဘဲ ငြိမ်ခံနေလိုက်နော်။
(၅။ ကိုယ့္ခ်စ္သူက ခ်စ္လို႔ အခုလို ဂ႐ုစိုက္ေပးရင္ မၿငိဳျငင္ဘဲ ၿငိမ္ခံေနလိုက္ေနာ္။)
၆။ စိတ်ဆိုးနေတဲ့ အချိန် ကိုယ့်ဘက်က သွားစမိရင်တော့ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ ကိုယ်ပဲ ငြိမ်သာခံလိုက်တော့နော်။
(၆။ စိတ္ဆိုးေနတဲ့ အခ်ိန္ ကိုယ့္ဘက္က သြားစမိရင္ေတာ့ ကိုယ့္အျပစ္နဲ႔ ကိုယ္ပဲ ၿငိမ္သာခံလိုက္ေတာ့ေနာ္။)
၇။ အိပ်နေတဲ့ သူများအတွဲတွေ Ro တာလောက်တော့ ကိုယ်တွေအတွဲက သနားတယ်။ နိုးလာရင် လုံးဝ Suprise ပဲ။
(၇။ အိပ္ေနတဲ့ သူမ်ားအတြဲေတြ Ro တာေလာက္ေတာ့ ကိုယ္ေတြအတြဲက သနားတယ္။ နိုးလာရင္ လုံးဝ Suprise ပဲ။)
၈။ တခါတလေကျတော့လည်း အဲ့ဒီလို…
(၈။ တခါတေလက်ေတာ့လည္း အဲ့ဒီလို…)
၉။ Gym အတူတူ သွားဆော့ရင်တော့ သူ့ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်ပါ အားပျက်သွားမယ်နော်။
(၉။ Gym အတူတူ သြားေဆာ့ရင္ေတာ့ သူ႔ကိုၾကည့္ၿပီး ကိုယ္ပါ အားပ်က္သြားမယ္ေနာ္။)
၁၀။ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ကိုယ်က ဟောက်စားလုပ်လိုက်လဲ ခဏပဲ ရတယ်။
(၁၀။ ႐ုပ္တည္ႀကီးနဲ႔ ကိုယ္က ေဟာက္စားလုပ္လိုက္လဲ ခဏပဲ ရတယ္။ )
#Preview photo credit murrzstudio / instagram
ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းခလေး တယောက်နဲ့တယောက် တူညီတဲ့စကားတခုကို ပြောပေမယ့် အချင်းချင်းကြားနားလည်မှုကတော့မတူညီကြပါဘူး။ တဦးချင်းကပြောဆိုတဲ့ စကားစုတွေဟာ အနက်အဓိပ္ပါယ်တူညီပေမယ့် သက်ရောက်မှုနဲ့ နားလည်မှုတွေကကွာခြားမှုရှိတယ်လို့ လေ့လာမှုတခုအရသိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ တခါတရံ စကားအထအနကောက်ပြီး ငြင်းခုံရန်ဖြစ်တာမျိုး၊ဒေါသထွက်ရတာမျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်ရတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးအဖြစ်တွေကနေ ချစ်သူနှစ်ဦးကြား စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုတွေများပြားလာပြီး...
ကျွန်မတို့တွေရဲ့ အပြုအမူတွေဟာ မတူကွဲပြားတဲ့လူတွေရဲ့ ပတ်ပတ်လည်မှာ ကွဲပြားခြားနားသွားကြပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ကျွန်မတို့သတိထားမိချင်မှ ထားမိပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီကနေ့မှာ Lifestyle_Myanmar ကနေ ကျွန်မတို့ဟာ ကျွန်မတို့ချစ်ခင်ရင်းနှီးရသူတွေနှင့် သူစိမ်းတွေအကြား အပြုအမူတွေ ဘာကြောင့်ကွဲပြားသွားရတာလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁။...